ကျွန်တော်တို့ကိုအဟောင်းကိုဟာသ၏သူရဲကောင်းစိတ်ချပါအမျှအရာအားလုံးဂရိနိုင်ငံ၌တည်ရှိ၏။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှသူမှား - ထိုခရီးစဉ်ပျံသန်းဖို့လိုအပ်သမျှကိုဂရိနိုင်ငံသည်မဟုတ်, ထိုထဲတွင်ရှာတွေ့မှ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ။ ဒါဟာကမ္ဘာလုံး၏ဤထောင့်ရှိအတူတူသင်စိတ်ကူးနိုငျသောဘဏ္ဍာရှိသမျှတို့ကိုစုဝေးစေကြပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက်ကိုအားလုံးကိုမှတ်တမ်းများရိုက်နှက်, ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. , ဒူဘိုင်းအတွက်အထင်ရှားဆုံး။
အမ်းမရိတ်၌ဟုတ်ပါတယ်, စျေးဝယ် - မစျေးပေါပျော်မွေ့။ ဒါပေမဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်စျေးကြီးရွေးထက်ပိုမိုနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ရေး။ အာရုံစိုကျရကျိုးနပ်ကဘာလဲ?
သာဒူဘိုင်းခဲ့ပြီးမှ, ရွှေထံမှထုတ်ကုန်များ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးရှိကွောငျးယုံကြည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့, သင်တိုင်းအရသာအဘို့အနည်းတူအနုစိတ်ရတနာကိုရှာဖွေဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားဟာကမ္ဘာ့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ နှင့်ရောင်းသူစျေးနှုန်းကြောက်လန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကိုခံရကြဘူး - အရှေ့ကိုအခြားမြို့၌ရှိသကဲ့သို့ဤအရပ်၌အပေးအယူလုပ်ညှိနှိုင်းဖို့။
တောက်ပနေကိုရွှေအော်ဟစ်နေကြသည်သူများသည်များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ပျော့ဆိုရင်တော့ Matte ပုလဲပင်လယ်ပုလဲ၏ထုတ်ယူခြင်းရှည်လျားအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရိုးရာယာဉ်အတွက်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အကြံပြုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ဒါကြောင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကနေအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအဖြစ်မိမိနာမအဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
နံ့သာ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုဒူဘိုင်းကနေတစ်ခုမွှေးကြိုင်အမှတ်တရပစ္စည်းယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပူကြောင့်အဘယ်သူမျှမအရက်သေစာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ဒေသဆိုင်ရာရေမွှေး။ ဒါကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာရှည်အရေပြားအတွက်အရသာစောင့်ရှောက်လော့။ သင်ချင်အတိအကျအရာကိုသိလျှင်, ဒေသခံမာစတာဆေးသမားသင်တို့အဘို့အသီးသန့်သီချင်းရောနှောနေခြင်းပါလိမ့်မယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားရန်အဘို့အဒါဟာချစ်တော်မူထိုမိနျးမအဘို့အဒူဘိုင်းကနေရောက်စေဖို့ဘာမလိုအပ်ပါဘူး - သူမ၏တစ်ဦး cashmere shawl ဒေသခံအလုပ်ပေးပါ။ နှင့်သူမ၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမျှဘောငျကိုသိရမယ်လို့ - ကအပြင်အာရပ်အိမ်တော်အဘို့အဝတ်သခင်ပန်းထိုးလက်နက်ဝယ်ဖို့။
ဆေးရွက်ကြီးပိုက်, တမာကူ, ပစ္စတိုနှင့်ဓားမြှောင် - ဒူဘိုင်းပုလ် "ကလေးကစားစရာ" မှယူဆောင်စိတ်တော်တတ်နိုင်သမျှချစ်သူတို့။
halva, nougat, မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ရက်စွဲများ၏မျိုးစိတ်ရာချီ - ကလေးများယူအေအီးသကြားလုံးအထဲကနှုတ်ယူစိတ်တော်သေချာပါသည်။
တစ်ဦးတည်းခရီးထွက် - "အဘို့အ" နှင့် "ဆန့်ကျင်"
Tsarskoye Selo အတွက်အလက်ဇန်းဒါးနန်းတော်
မက်စ်မာရ် - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
Chanel - Fall 2016 - အလှကုန်
Stella McCartney ဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွကျား-based အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်အရေးယူ support တိုက်တွန်းလိုက်သည်
စိတ်ကူးယဉ်စာအုပ်များ၏စာမကျြနှာကနေသွားကြပြီဖြစ်သောစကော့တလန် 20 ထိုင်ခုံ,
ပုဇွန်နှင့်အတူပန်းကန် - ပင်လယ်စာနှင့်အတူ appetizers, သုပ်နဲ့ပူဟင်းလျာများ၏အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
Rihanna တို့က Sneaker
အတွင်းပိုင်းအတွက် wallpaper "Van Gogh"